Fanorenana fotodrafitrasa :: Tsy hihemotra manoloana an'ireo sakantsakana atao aminy Rajoelina Andry • AoRaha
Fanorenana fotodrafitrasa Tsy hihemotra manoloana an’ireo sakantsakana atao aminy Rajoelina Andry
Tsy hiverin-dalana. Nanamafy ny faha­vononany tsy hihemotra hiroso amin’ny fanatanterahany an’ireo fotodrafitrasa nampanantenainy ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry. Nandritra ny kabary nataony, tany Antsi­rabe, tamin’ny sabotsy teo, no nanambarany fa : «tsy ekena ny fanakantsakanana ataon’ ny sasany amin’ny fanorenana fotodrafitrasa hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena».
«Tsy ekena ny fanaovana fitaovana politika izany fanakantsakanana izany. Misy ireo mitsivalam-pandry amin’ny fampandrosoana ny firenena ary milaza fa tsy mety avokoa ireo zavatra rehetra atao eto Madagasi­kara. Tsy ekena izany», hoy ny Filoham-pirenena.
Manoloana ny tranga fanoherana nataon’ireo mponina teny Ambohitrimanjaka indray, dia hentitra Rajoelina Andry. «Tsy ekena ny fandratrana ny mpitandro filaminana», hoy izy. Araka izany, tsy hihemotra amin’ny fananganana an’ilay tanàn-dehibe « Tanà-masoandro» eny an-toerana ny Filohan’ny Repoblika ary namaky bantsilana ny fisiana ambadika politika amin’ny hetsika tanterahina eny an-toerana.
An-kilan’izany, vonona hanohy ny fanavaozana an’ ireo fotodrafitrasa efa natom­boky ny fitondrana teo aloha koa ny tenany. “Na iza na iza nanao an’izany dia hovitain­tsika ary hohatsaraina izy ireny”, hoy Rajoelina Andry. Isan’izany, ohatra, ny fana­tsarana ny kianja mitafo ho an’ny fanatanjahantena ao Antsirabe.
«Niteny taminareo aho hoe ampio aho dia ham­piako ianareo. Fitaovana daholo izany rehetra izany», hoy izy. Vahoaka maro rahateo no nanotrona ny Filoham-pirenena nandritra ny fitsidihana nataony tao Antsirabe.
Ady amin’ny « covid-19 » Hiezaka mafy hampitombo ny fitiliana ny governemanta
Ndao hizory ary izato làlana Andriamatoa Filoha. Ny Malagasy fotsiny no aza vonoina rehefa tsy hihemotra ianao…
Baolina kitra :: Rava ny nofinofin’ny Barea handeha amin’ny CHAN 2020
Lalàna hifehy ny fanoherana :: Hanatanteraka fivoriana manokana ireo loholona